မြန်မာနိုင်ငံသား ကိုပြည့်စုံအောင်ရဲ့ အံ့မခန်း ပန်းပုလက်ရာကြောင့် ကမ္ဘာမှာ မြန်မာက ပထမဆုရပြီ……. – EverBestMM
မြန်မာနိုင်ငံသား ကိုပြည့်စုံအောင်ရဲ့ အံ့မခန်း ပန်းပုလက်ရာကြောင့် ကမ္ဘာမှာ မြန်မာက ပထမဆုရပြီ…….
မြန်မာတွေဟာ ဟိုးရှေးယခင်အဆက်ဆက်တည်းက မြန်မာ့လက်မှုပညာဖြစ်တဲ့ ပန်းဆယ်မျိုးကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ ပြုလုပ်နိုင်သူတွေ ဖြစ်ပါတယ် ပန်းဆယ်မျိုးထဲမှာ တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ ပန်းပု ပညာမှာဆိုလည်း တကယ့်ကိုလက်ရှိအချိန်ထိ ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်တဲ့ ပညာရှင်တွေ မြန်မာပြည်မှာ အများကြီးရှိတာပါ။
ခုချိန်မှာတော့ မြန်မာ့ပန်းပုပညာရှင်တစ်ဦးကနေ မြန်မာ့ပန်းပုလက်ရာကို ထင်ပေါ်ကျော်ကြားအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါပြီ အဲတာကတော့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး သစ်သားပန်းပု ပြိုင်ပွဲမှာ ဆုရရှိသွားတဲ့ ဒါးပိန်သားလေး ကိုပြည့်စုံအောင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး သစ်သားပန်းပု ပြပွဲ၊ ပြိုင်ပွဲ နှင့်အရောင်းပွဲတော်ကြီး ကို KMA Foundation က ကြီးမှူးကျင်းပတာဖြစ်ပြီး ပဲခူး ဆယ်မိုင်ကုန်းမှာတည်ရှိတဲ့ Shwe Pyi Resort မှာ နိုဝင်ဘာလ (၂၉) ရက်မှ ဒီဇင်ဘာလ (၄) ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် မြန်မာ့အနုပညာ သစ်သားပန်းပုပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်ပန်းပုဆရာ ၂၂၇ ယောက်ရဲ့ ပန်းပုလက်ရာများကိုပြသထားပြီး အဲဒီ ၂၂၇ ယောက်ထဲမှာမှ ပထမရရှိသွားတဲ့ ပန်းပုကတော့ဒါးပိန်သားကိုပြည့်စုံအောင် ၏ ” ရိုးရာအမွေ ” လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ပန်းပုရုပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ရိုးရာအမွေဆိုတဲ့ ပန်းပုရုပ်လေးကတော့ မြန်မာ့ရှေးခေတ် သျှောင်ထုံးနဲ့ အဘိုးအိုတစ်ယောက်က ဆေးတံခဲပြီး ပန်းပုထုနေကာ ဘေးမှာ မြေးကလေးငယ်တစ်ယောက်က စိတ်ဝင်တစားကြည့်နေဟန်နဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက လက်ချုပ်လိုက်နေဟန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် ဘေးမှာက ရေနွေးခရားတစ်လုံးနဲ့ အကြမ်းပန်းကန်နှစ်လုံး၊ နောက်မှာ မြန်မာရိုးရာ ရုပ်သေးရုပ်လေးများဖြစ်တဲ့ မင်းသားမင်းသမီး၊ ဇော်ဂျီ၊ ဝန်ကြီး၊ စစ်သူကြီး၊ ဖိုးဝရုပ်၊ နတ်သား စတဲ့ အရုပ်ကလေးများကို ထုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ့်ကို လက်ရာမြောက်အသက်ဝင်လွန်းတဲ့ ပန်းပုလက်ရာဖြစ်တာကြောင့် ခုလိုဆုရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်…ခုလို ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး သစ်သားပန်းပုပြပွဲ ပြိုင်ပွဲမှာ ပထမဆုရရှိခဲ့တဲ့ ဒါးပိန်သားလေး ကိုပြည့်စုံအောင်ရဲ့ ပန်းပုလက်ရာလေးတွေကို ပရိသတ်ကြီးတို့ ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်နော်။ကိုပြည့်စုံအောင် လက်ရာကို သဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆို ဂုဏ်ပြုစကားလေးတွေ ပြောပေးခဲ့ပါနော်။
ဗစ်တိုးရီးယားအမှုဖြစ်စဉ်၌ တာဝန်ကျေပွန်စွာမထမ်းဆောင်နိုင်သူများကိုအရေးယူရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတက ညွှန်ကြားထား
ရွယ္ထားေနာ္ တစ္သက္လုံးအသုံးဝင္မယ့္ ေဆးနည္းေပါင္းစုံေတြရွယ္ထားေနာ္ တစ္သက္လုံးအသုံးဝင္မယ့္ ေဆးနည္းေပါင္းစုံေတြ
သတိမမူဘဲ အသုံးပြုမိနေကြတဲ့ ဝါယာရှော့ ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းများ